उपत्यका बन्दको दिन कस्तो भयो तपाईंको आज ?
चन्द माओवादीले आज बिहिबारका लागि आयोजना गरेको उपत्यका बन्दको खासै प्रभाव देखिएन । यद्धपि बन्दका कारण बिहानैदेखि नीजि तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु भने कमै चलेका थिए । यही प्रसंगमा कलाकर्मी डटकमले केही सेलिब्रेटहिरुलाई उनीहरुको आजको दिन कस्तो रहेयो भन्ने जिज्ञासा राखेको छ।
जान्बी बोहोरा, नायिका
हिजो राती १० बजे नै बन्दको बारेमा थाहा पाएकी थिए । त्यसैले आज बिहान १० बजेसम्म म बेडमै थिएं । नयां घरमा सिफ्ट भएकाले सामानहरु मिलाउनु पर्ने थियो । घरको सरसफाइमा सहयोगीलाई पनि सहयोग गर्दै आजको बन्दको दिनको सदुपयोग गरें । त्यसपछि सांझपख किनमेलमा व्यस्त भएं ।
नरेश भट्टराई, सञ्चारकर्मी
मेरो त आजको बन्दको दिन बडो अचम्मले बित्यो । बिहान ईमेज एफएममा ‘शुभ दिन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कारको साटो बाइक रोजें । तर चिसोले गर्दा होला बाइक स्टार्ट नै भएन । बाइक स्टार्ट नभए पछि नजिकैको ग्यारेज गएं । त्यहांको मेकानिक बाइकमा बसेर मलाई ठेल्न लगायो । पुरै शान्तिनगर चक्कर लगाउंदा पनि बाइक स्टार्ट भएन । हार खाएर त्यहीं ग्यारेजमा भएको सबैभन्दा थोत्रो बाइक लिएर इमेज एफएमतिर लागें । बाटोमा चार पल्ट बाइक स्टार्ट बन्द भयो । एफएम पुग्दा साढे ८ नै बज्न लागेको थियो । थोत्रो बाइकका कारण एकातिर एफएम पुग्नै ढिला भयो, अर्कोतिर चिसो पनि खाइयो । जय होस बन्दकर्ताको !!!
नीलडेभिड कटवाल, हेयर स्टाइलिष्ट
आज बन्दको दिन म घरमै बसें । बोर भयो । सलोन र एकेडेमी सबै बन्द थिए । त्यसैले मलाई मात्र होइन सबै देशवासी सबैलाई यो बन्दले दुःखी तुल्याएको छ ।
सहिमा श्रेष्ठ, गायिका
मलाई त आजको बन्दले खासै छोएन । सधैं झैं आज पनि म गीत रेकर्डिङ अनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वाता दिन तथा र भेटघाटमै व्यस्त भएं ।
हेमन्त गौतम, टेलिभिजनकर्मी
आज बन्द भएको दिन, बिहान अलि ढिलै घरबाट निस्किए । साझा यातायात आजसम्म चढेको थिइन, चढ्ने बिचार आयो र कोटेश्वर हुँदै बबरमहलबाट सिहदरबार (नेपाल टेलिभिजन) गए । अफिसियल काम सकेर, नेबिको बिस्कुटको नयाँ उत्पादनको सार्बजनिक समारोहमा होटल अन्नपूर्ण गइयो ।
प्रस्तुती : अरुणा भट्टराई